पानीमा रुझ्दै आफ्नो प्रिय साथीलाई बिदाई गर्न आइपुगे बलिउड सेलिब्रेटी … तस्वीरहरू हेर्नुहाेस – Jagaran Nepal
किनकि यसबारे कहिले उनीहरूले तयारी नै गरेनन् । उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू परीक्षामा होइन जीवनमा असफल भई रहेका छन् । परीक्षाको नतीजाले निर्णय (decide) गर्दैन कि हामी बिजेता हौं कि हरुवा हौं । यो निर्णय त कोशिश (try) ले गर्दछ कि हामीले कोशिश कत्तिको गरेछौं वा गर्यौं कि गरेनौं ।”
अभिनेत्री कंगना रनावतले सुशान्तको निधनमा प्रश्न उठाएकी छिन् । इन्टाग्राममा एक भिडियो जारी गर्दै उनले सुशान्तको निधनप्रति प्रश्न उठाएकी हुन् । इन्टाग्राममा लाईभमा आएर उनले भनिन्, “धेरै मिडिया तथा चलचित्रकर्मीले मानसिक स्वास्थलाई लिएर बिचरा भनेको पाए ।
तर के उनीहरुले उ जिउँदो छदाँ उस्को महत्व बुझ्ने कोशिस गरे” यो सु साइड हो वा प्ला न म र्डर ? उनले भनिन् । सुशान्तसँग नजिक रहेकी कंगनाले उस्लाई म र्न बाध्य पारिएको बताउँदै बलिउडकर्मी माथि कडा आक्रोश व्यक्त्त गरेकी छिन् ।
बाचुँञ्जेल कहिल्यै उस्को कामको प्रशंशा गरेउ ? उस्लाई कहिले अघि बढ्न प्रेरित गर्यौं ? फिल्मी दुनिँया भन्दा बाहिरको परिवारबाट आएर उसले गरेको संघर्षको बारेमा कसैले सकरात्मक रुपमा लेख्यौं ? परिवारबादलाई मात्र बलिउड देख्ने कलाकारले अहिले मेन्टल हेल्थ भन्दै सहानुभुति दिएको फिटिक्कै सुहाएन ।